Ciidamada amniga oo duleedka degmada Caabudwaaq ku qabtay gaari laga soo buuxiyay walxo qarxa | RBC Radio
Ciidamada amniga oo duleedka degmada Caabudwaaq ku qabtay gaari laga soo buuxiyay walxo qarxa
Posted on March 19, 2017 RBC, Wararka
Muqdisho (RBC Radio) Ciidamada nabadgalyadda maamulka Galmudug ayaa gacanta ku dhigay gaari laga soo buuxiyay walxo qarxa,kaaso ay ku qabteen inta u dhaxeysa Caabudwaaq iyo deegaanka Xanan-buure.
Howlgal gaar ah oo ay ciidamada amniga gaar ahaana kuwa nabadsugidda fuliyeen ayaa lugu sheegay xilli dambe oo xalay ah in lugu soo qabtay gaarigan oo noociisu ahaa Caasi.
Labo ruux oo gaariga la socotay ayaa sidoo kale la qabtay,sida ay sheegen saraakiisha ciidamada,iyagoo inta ku darray gaariga inuu ku socday degmada Caabudwaaq halka oo la doonayay in lugu weerarro,sida ay sheegen.
Warka ka soo baxay saraakiisha nabadsugidda Galmudug,waxaa kalo ay ku sheegen in gaariga qaraxa siday uu ka yimid deegaanka Galhareeri oo ay gacanta ku hayaan al-Shabaab, waxaana saraakiisha ay sheegeen inuu soo maray gaariga deegaanada ay gacanta ku heysto Ahlusuna.
Ugu dambeyntii,Illaa labo gaari ayaa la sheegay in la isku bedelay qaraxa, waxaana gaadiidkii markii hore qaraxa ka soo qaaday Galhareeri uu gaari kale ku wareejiyay markii uu soo gaaray inta u dhaxeysa deegaanada Godinlabe iyo Mareer Gur